Muxuu Ronald Koeman ka yiri soo laabashadii cajiibka aheyd ee kooxdiisa Barcelona ku hor sameysay Sevilla? – Gool FM
(Barcelona) 04 Maarso 2021. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay u qalantay inay u soo baxdo finalka tartanka Copa del Rey ee dalka Spain, halkaasoo uu kula ciyaari doono guuleystaha kulanka labada kooxood ee Athletic Bilbao iyo Levante.
Kooxda Barcelona ayaa sameesay soo laabasho cajiib ah kulanka lugta labaad wareega afar dhamaadka Copa del Rey, kadib markii ay ku xasuuqeen naadiga Sevilla 3-0, Blugarana ayaa jaratay tikidkeeda kulanka finalka ah ee tartankan, maadaama Sevilla ay ciyaartii lugta hore ku soo adkaatay 2-0.
Haddaba ciyaarta kaddib macalinka reer Holland ee Ronald Koeman ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna u sheegay:
“Waxaan u dagaalanay ilaa iyo heer daal, waa wax aan la rumeysan karin, aad ayaan ugu qanacsanahay shaqada kooxda ay qabatay, waxaan u qalnay inaan guuleysano, waan ka fiicneyn labada kulanba, haa waxaan aheyn kuwa ugu fiican.”
“Horey ayaan u deg degnay, kooxdu aad ayey u xoogantahay maskax ahaan iyo jir ahaanba, ma ku ciyaari kartid kubad aad uwanaagsan xaaladahan oo kale, laakiin ilaa iyo inta aad kubadda heysato marwalba waad abuuri kartaa fursado.”
Arinta ku saabsan inay soo laabasho kale sameyn karaan kulanka lugta labaad wareega 16-ka tartanka Champions League ee kooxda Paris Saint-Germain, sida dhacday maanta, Ronald Koeman wuxuu u muuqday inuu yara rajo xun ka qabo, madaama uu rumeysan yahay in howsha ay aad uga dhib badnaan doonto marka loo fiiriyo farqiga weyn ee u dhexeeya natiijada labada kulan.
“2-0 waa arin, 4-1 waa arin kale, waxaan ku bilaabi doonaa ciyaarta si aan u guuleysano, haddii aan taa ku guuleysan karin, waan aqbalidoonaa oo waxaan ku dhaqaaqeynaa wadadeena.”